Voadika ny 18 Janoary 2013 13:47 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, Italiano, عربي, English
Isaky ny faharoan'ny volana Janoary, ankalazaina ao Grenada ao Espaina ny “El día de la Toma de Granada” (andro nakàna an'i Grenada). Tamin'izany andro izany tamin'ny taona 1492, nandao ny Emirà Grenada i Muhammad XII (Mpanjaka Boabdil). Nahazo ny saikanosy iberiana ny kalifà (fiandrianan'ny mpanjaka Islamo) Omayyady tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-valo, ary nampitsahatra ny fanjakazakan'ny Islamika ny firodanan'i Grenada tamin'izany andro izany, faritra fantatra amin'ny anarana hoe Al-Andalus ao amin'ny tontolo Arabo .
@mdamra: Raha mbola revo anaty fotaka i London, nahitaa fanariam-pako voalohany teo amin'ny tantara i Córdoba, nisy ny fanangonana nataon'ny fiara sy ny fanadiovana ny lalana!
Na izany aza, nanomboka ny adihevitra lehibe tao amin'ny Twitter. Nihevitra ny mpisera Twitter sasany fa manamarika ny fahaverezan'ny ampahany amin'ny tontolo Islamika izany andro izany.
@HmdSaud: Mihevitra ve ianao ry namana Espaniola fa adinonay izany